उमेर हदबन्दीबिरुद्धको आन्दोलन बिद्यार्थी राजनीति बिरोधी जत्थाको रुवाबासीमात्र हो – YesKathmandu.com
मिलन एम.सी.(महतरा क्षत्री) नेकपा(माओवादी केन्द्र) निकट अखिल(क्रान्तिकारी) का केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुन् । स्ववियु चुनावका निम्ति क्रान्तिकारी ले उपत्यकाका प्रमुख क्याम्पसहरुमा केन्द्रीय उपाध्यक्षलाई कमाण्डरका रुपमा खटाएको छ । मिलन मानविकीको केन्द्रीय क्याम्पस आर.आर मा क्रान्तिकारीको तर्फबाट कमाण्डर तोकिएका छन् । स्ववियु चुनावका सम्बन्धमा केन्द्रित रहि मिलनसंग भरत रावलले गरेको कुराकानीः
स्ववियु चुनावका लागि अखिल(क्रान्तिकारी) को तयारी के छ ?
अखिल(क्रान्तिकारी) सम्पूर्ण तागतका साथ स्ववियु चुनावमा खटिएको छ । अरु संगठनहरु भन्दा अगाडि देखि नै हामीले स्ववियु चुनाव केन्द्रित गतिबिधीहरु सञ्चालन गर्दै आइरहेका थियौं । सातवटै प्रदेशमा स्ववियु केन्द्रित भेला र प्रशिक्षणहरु सम्पन्न भइसकेका छन् । देशैभरीका कलेजहरुमा संगठनले स्ववियु चुनावका लागि कमाण्डर सहितको टिमलाई परिचालित गरिसकेको छ । सबै साथीहरु उल्लास र उत्साहका साथ मैदानमा डटिरहनुभएको छ । अखिल(क्रान्तिकारी) ले ८ वर्षदेखि हुन नसकेको स्ववियु चुनावलाई जुनसुकै मुल्य चुकाएर भएपनि सम्पन्न गर्ने संस्थागत धारणा तय गरेर नै आफ्नो शक्ति र सामथ्र्य स्ववियु मा लगाएको छ ।
अखिल(क्रान्तिकारी) ले स्ववियु परिणामलाई लिएर आफ्नो अवस्थाको बारेमा आन्तरिक रुपले कस्तो मुल्यांकन गरेको छ ?
पछिल्लो समय अखिल(क्रान्तिकारी) को पक्षमा देशैभरी उर्लिएको माहोल हेर्दा पहिलो संगठनका रुपमा स्थापित हुन्छ भन्ने हाम्रो आन्तरिक मुल्यांकन छ । एजेण्डाको हिसाबले त हामी पहिलो संगठन भइसक्यौं । हामीले बाटो छाडेको बिद्यार्थी राजनीतिलाई सहि ट्रयाकमा ल्याउन भनेर २८ बर्षे उमेर हदबन्दीसहित चुनावमा जाने एजेण्डा टियुको प्राज्ञ सभाबाट पारित गराउन सफल भयौं । यसले अब बिद्यार्थी राजनीतिको ‘चार्म’ लाई पुर्ववत अवस्थामा फर्काउने छ । कसैले पनि विद्यार्थी राजनीतिमा आवद्ध छु भन्दा टाउको निहुराउनुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ । त्यस्तै सबैको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नका लागि मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई लागु गर्न हाम्रो संगठन सफल भएको छ । यस निर्णयले विगतमा जस्तो स्ववियुमा समेत निश्चित संगठनको एकलौटी दादागिरीलाई अन्त्य गरेको छ । त्यस्तै विश्वविद्यालयका बिद्यार्थीलाई ‘पार्ट टाइम जब’ को ब्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने मागलाई अखिल(क्रान्तिकारी) ले जोडदार रुपमा उठाएको छ । यो माग पुरा गर्नपनि हामी दृढ रुपले कृतसंकल्पित छौं । त्यस्तै हाम्रो मातृ पार्टीको नेतृत्वमा देशभरी लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने सफल अभियान चलेको छ । यी सबै बिषयलाई दृष्टिगत गर्दा अखिल(क्रान्तिकारी) स्ववियु चुनावमा निर्विवाद रुपले पहिलो संगठनका रुपमा स्थापित हुनेमा दुइमत छैन ।
हालैमात्र उमेर हदबन्दीको बिरुद्धमा नेपाल विद्यार्थी संघको एउटा तप्का आक्रामक रुपमा लागि परेको छ । यहि कारणले चुनाव हुंदैन की भन्ने आशंका बढेको छ । अखिल(क्रान्तिकारी) ले यो बिषयलाई कसरी लिएको छ ?
उमेर हदबन्दीको बिरुद्धमा ने.वि संघभित्रको एउटा समुह जसरी लागिपरेको छ यसलाई अखिल(क्रान्तिकारी) ले गम्भिरताका साथ लिएको छ । नियमित विद्यार्थीसमुहको बिचबाट स्ववियुको नेतृत्व निर्माण गर्नुपर्छ भनेर जसरी हाम्रो संगठनले अडान राख्यो र त्यसलाई पारित गराइयो यसले एकथरी क्याम्पसको गेट कुरेर जिन्दगी गुजार्ने साथीहरुको निन्द्रा लुटेको छ । बिद्यार्थी कल्याण कोषमाथि ब्रह्मलुट गर्नलाई पचासौं वर्षको उमेर सम्मपनि स्ववियु ढुक्ने गलत परिपाटीको अन्त्य गर्दा मुट्ठीभरको एउटा तप्का उत्तेजित भएको साँचो हो । तर यहि कारणले स्ववियु चुनाव नहुनुपर्ने कुनै कारण छैन । उमेर हदबन्दीबिरुद्धको आन्दोलन नियमित बिद्यार्थीसंग कुनै सरोकार नराख्ने बिद्यार्थी राजनीति बिरोधी जत्थाको रुवाबासीमात्र हो । बिश्वविद्यालय र क्याम्पसमा पढ्ने आम बिद्यार्थीले स्वागत गरेको र उनीहरुलाई उत्साहित समेत गरेको उमेर हदबन्दीको निर्णय बिद्यार्थी राजनीतिको ‘माइलस्टोन’ हो । यसबाट पछाडि हट्ने बिषयलाई हाम्रो संगठनले कल्पनासम्म गरेको छैन । यदि यहि कारणले निर्वाचन नहुने हो भने ने.वि संघ भाडाका बिद्यार्थीहरुमा बिश्वास गर्ने संगठन हो भन्ने पुष्टि हुनेछ । यस्तो आत्मघाती कदम ने.वि संघका साथीहरुले चाल्नुहुन्न भन्नेमा म चाहिँ पूर्ण रुपले बिश्वस्त छु ।
एउटा बिद्यार्थी जो विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरुमा नियमित रुपमा अध्ययन गर्छ र राजनीतिप्रति त्यत्रो चासोपनि राख्दैन उसले अखिल(क्रान्तिकारी) लाई नै किन मतदान गर्ने ?
अखिल(क्रान्तिकारी) को इतिहास अन्य विद्यार्थी संगठनको भन्दा फरक छ । हामीले बलिदान र उत्सर्गको मैदानबाट आफ्नो पहिचान निर्माण गरेका हौं । हामी कहिल्यैपनि आम विद्यार्थी त्यसमाथि पनि उत्पिडीत र विपन्न समुदायको प्रतिनिधित्व गर्नेहरुको मुद्धाबाट कहिल्यैपनि बिचलित भएनौं । क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा आम नेपाली जनताका गरिब छोराछोरीको पहुंच स्थापित गर्नमै हाम्रा सम्पूर्ण आन्दोलन र संघर्षहरु केन्द्रित रहे । त्यस अर्थमा यो जनताका छोराछोरीको मुद्धा बोक्ने संगठन हो । यस संगठनलाई न्यायप्रतिको संघर्ष र सपनामा सामेल प्रत्येक बिद्यार्थीले मतदान गर्नेछन् । दोश्रो कुरा हामीले बिद्यार्थी राजनीतिलाई सहि बाटोमा ल्याउनका लागि उमेर हदबन्दीको एजेण्डामा भिषण संघर्ष ग¥यौं र यो एजेण्डा पारित पनि गरायौं । यसबाट नियमित उमेर समुहका बिद्यार्थीहरुमा हामीप्रति अत्याधिक आकर्षण रहेको पाएका छौं । राजनीति प्रति पछिल्लो समय देखा परेको बितृष्णाको अन्त्य गर्न जसरी हाम्रो संगठनले संघर्षको नेतृत्व गरेको छ यसबाट नियमित बिद्यार्थीहरुले सोचबिचार गरेर नै हामीलाई मतदान गर्नेछन् भन्नेमा अखिल(क्रान्तिकारी) आश्वस्त छ । अब हामी क्याम्पस र बिश्वविद्यालय अध्ययन गर्ने बिद्यार्थीलाई पार्ट टाइम रोजगारी दिनुपर्ने एजेण्डा लिएर चुनावमा होमिएका छौं । बास्तबिक बिद्यार्थीहरुको मुद्धा बोक्ने संगठन भएका कारणले आम बिद्यार्थी हामीलाई मतदान गर्न आतुर छन् । तीनै बिद्यार्थीहरुको बलमा अखिल(क्रान्तिकारी) स्ववियु चुनावमा पहिलो शक्तिका रुपमा स्थापित हुनेछ ।
आर.आर क्याम्पसमा चुनावी कमाण्डरका रुपमा अखिल(क्रान्तिकारी) को तर्फबाट खटिनुभएको छ । अहिलेसम्मको अनुभवले आर.आर मा अखिल(क्रान्तिकारी) को अबस्थालाई कुन रुपमा मुल्यांकन गर्नुभएको छ ?
अन्य क्याम्पस भन्दा आर.आर क्याम्पस अलि भिन्न छ । मानविकीका बिद्यार्थीहरु अध्ययन गर्ने भएकाले सानातिना हल्ला र तरंगले उनीहरुलाई छुंदैन । सामाजिक विज्ञानका बिद्यार्थीहरु हल्ला र ‘स्टन्ट’ को पछाडि दौडिन्नन् भन्ने अनुभुत गरेको छु । त्यसैले आर.आर का बिद्यार्थीले एजेण्डा केन्द्रित भएर मतदान गर्नेछन् । बिद्यार्थीहरुका जायज मुद्धा बोकेर चुनावमा होमिएका कारणपनि आर.आर का बिद्यार्थीहरुको पहिलो रोजाइमा हामी नै छौं । त्यसमाथि आर.आर क्याम्पसमा बिगत देखि नै एमाले निकट अनेरास्ववियु ले जित्दै आएको छ । चुनावचाहिँ जित्ने तर सुधारका कुनै काम नगर्ने उसको प्रवृत्तिले त्यहाँका बिद्यार्थीहरु वाक्कदिक्क भएर बिकल्प खोज्न आतुर रहेको पाएको छु । यहाँका भौतिक संरचना र शैक्षिक गतिबिधीका बिषयमा अनेरास्ववियु ले गरेको बेइमानीलाई बिद्यार्थीले मुल्यांकन गरेर बसेका छन् । त्यसैले देशैभरी र आर.आर मा समेत अखिल(क्रान्तिकारी) स्ववियुमा पहिलो शक्ति हुनेमा मलाई कुनैपनि द्विबिधा छैन ।
सर्वाेच्चले भन्यो ‘आमाका नामबाट नागरिकता दिनू’
पारसलाई नभेटेरै हिमानी आज भारत जाँदै